Český ráj a hrad Trosky - Ngwudata egwu na mgbasa ozi maka vidiyo vidio YouTube ma ọ bụ ọrụ multimedia
HomeblogCzech Paradise na Trosky
Czech Paradise na Trosky	Hapụ ikwu
Ebibi nke Trosky Castle dị n'elu ugwu ugwu ahụ (488 m n'elu elu igwe), n'obodo Troskovice na district nke Semily Liberecký Region. Ọ bụ nke ala (nke Ụlọ Ọrụ Nchịkọta Ihe Na-achị) na-enweta ya na ọha mmadụ.
Debris bụ ihe nnọchianya nke Paradaịs Paradaịs na otu n'ime ụlọ ndị kasị eleta na Czech Republic. N'elu elu nke ugwu bụ ebe nchekwa nke ihe ncheta nke Trosky. Elu bụ ebe kachasị elu nke ugwu ugwu Vyskeřská. Ebe dị elu nke ụlọ elu (Virgin Tower) bụ 514 mita. Na 1928, Trosky ghọrọ akụ nke Czech Tourists Club.
Na 2000 nnukwu ụlọ e wuru n'okpuru elu panna atụmanya na njedebe nke ochie emechaghi steepụ na e wuru ọhụrụ ohere akwa mgbago na ị na-elele ikpo okwu na-elu Baba na-enye ohere panoramic echiche nke dum gburugburu na-akpali echiche nke ụlọ elu nke abụọ panna.
Mgbe ọnwụ nke Čeňka si Vartenberk, bụ onye guzobere ụlọ ahụ, ụlọ nke Eze Wenceslas IV dara. Year 1398 enwetara nnukwu ụlọ na dum ala si King Otto nke Berg na mgbe ọ na ketara rekeji nwa-ya nwoke nke otu aha - Ota ntà. Ya, dịka onye Katọlik nke nwere obi ọcha, iwe nke ndị agha Huss nọ na-awakpo 1424 Trout. Otú ọ dị, nnukwu ụlọ ahụ enwebeghị ihe ịga nke ọma. Na 1455 nwa Otto Berg, Jan, rere Trosky dum manor onyenwe nke gbara agbata obi na nnukwu ụlọ ala na ụlọ na Ọkpụkpụ, nke bụ Jan Zajic nke Hazmburk. Otú ọ dị, maka ndị Debris, ọ pụtara n'ezie njedebe nke ndụ dị ndụ.
Na 1469, ndị agha ndị agha meriri ndị agha ahụ. Ụlọ ukwu ahụ ghọrọ etiti ochichi akụ na ụba ma gbanwee ọtụtụ ndị nwe ya ọtụtụ ugboro. Ọbụna n'afọ Agha Iri Atọ ahụ, ụlọ ahụ guzo, ọ bụ ezie na a gbahapụrụ ya ma gbahapụ ya. Isi mmiri na-agbachi nkịtị banyere otú ụlọ ahụ si lee anya mmalite ya. Enweghị onyinyo ma ọ bụ akara ọ bụla, ihe niile echekwara ọkụ. Site na isi mmalite, a maara na nanị mbụk ezi na foto nke Trosky weghaara Swedes n'oge Iri Afọ Atọ War nnukwu ụlọ nkume Gross wee kpọrọ ya Sweden. Na 1821, Valdštejnové Trosky na-ere Jan Lex nke Aehrental. Nwa-ya Alois malitere na 1841 ewu a gburugburu steepụ, nke chọrọ ime ka ọnụ ọgụgụ kasị elu nke Virgin, otú na-uru nke atụmanya nke gbara ya gburugburu ebe. Otú ọ dị, na 1843, onye wuru ụlọ ahụ nwụrụ, na-ahapụ ụlọ ahụ agwụchabeghị.
Na 1928, Trosky ghọrọ akụ nke Czech Tourists Club. Na 2000 nnukwu ụlọ e wuru n'okpuru elu panna atụmanya na njedebe nke ochie emechaghi steepụ si aehrentalské oge na e wuru ọhụrụ ohere akwa mgbago na ị na-elele ikpo okwu na-elu Baba na-enye ohere panoramic echiche nke dum gburugburu na-akpali echiche nke ụlọ elu nke abụọ panna. Nnukwu ụlọ bụ ugbu a na ihe onwunwe nke ala na na-ndinọ site National Heritage Institute na Prague - Regional Specialist Office na Liberec.
← Jablonec nad Jizerou si Sklenařice
Ndị jizers site na elu →